Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » USA Travel News » Fampandrenesana: Fiovan'ny rivo-doza Irma: malefaka kokoa any Miami, mafy kokoa any Tampa
Ny rivodoza Irma dia mety hiova avy any Florida Atsinanana mankany Florida Andrefana. Inona no dikan'izany? Ireo mpizahatany sy mponina any Florida dia nandositra ny morontsiraka atsinanana nitady fialofana any andrefana. Mety hahita fahatairana mampidi-doza izy ireo.
Hita fa, mazava ho azy, i Florida rehetra dia hiaina ny rivodoza mahery miaraka amin'i Irma. Ny tafio-drivotra dia andrasana hamely an'i South West Florida ankehitriny ho toy ny tafio-drivotra sokajy 4. Ny sokajy mivantana 5 nahavoa an'i Miami sy ny Florida East Coast izay be mponina dia mety tsy ho zava-misy intsony, fa ny fidona mafy kokoa any West Florida, ao anatin'izany ny Tampa sy St. Petersburg, dia mety hitranga.
Ny lozam-pifamoivoizana mampidi-doza any Georgia sy Caroline South dia lasa tsy dia azo inoana loatra.
Mandritra izany fotoana izany, ny tafio-drivotra sokajy 5 dia mamely ny morontsiraka avaratr'i Kiobà ary mety efa nanao fahavoazana manimba.
Namoaka ity fampandrenesana ity ny Ivotoerana Nasionaly momba ny rivodoza tamin'ny 5 maraina ny sabotsy maraina:
Ny fampitandremana amin'ny rivo-doza sy ny fampitandremana ataon'ny tafio-drivotra dia mipaka avaratra manaraka ny morontsiraka Florida Andrefana hatrany amin'ny reniranon'i Anclote ka hatrany Chassahowitzka.
Ny fampitandremana momba ny rivo-doza dia mitatra mianavaratra manamorona ny morontsiraka atsinanan'i Florida ka hatrany amin'ny lalan'ny Flagler / Volusia County
Tropical Storm Watch dia navoaka avaratry ny Beach Fernandina hatrany Altamaha Sound, Georgia.
Ny famantaranandro sy fampitandremana fanampiny dia mety ho takiana amin'ny ampahany amin'ny morontsirak'i Georgia sy South Carolina, ary koa ny ampahany amin'ny morontsiraky ny Helodranon'i Florida amin'ny andro ankehitriny.
FAMINTINANA NY FANONTANIANA SY NY FAMPANDROSOANA:
Misy fampitandremana amin'ny tafio-drivotra mahery vaika ho an'ny…
* Volusia / Brevard County Line mianatsimo manodidina ny saikinosy Florida hatrany Chassahowitzka
A Storm Surge Watch dia manan-kery ho an'ny…
* Avaratry ny tsipika Volusia / Brevard County mankany amin'ny tsipika Flagler / Volusia County
* Avaratry Chassahowitzka hatrany Suwannee River
* Flagler / Volusia County Line atsimo manodidina ny saikinosy Florida hatrany Chassahowitzka
* Farihy Okeechobee
* Helodrano Florida
* Faritany kiobanin'i Camaguey, Ciego de Avila, Sancti Spiritus, Villa Clara, ary Matanzas
* Bahamas afovoany sy ny nosy misosa
Ny Hurricane Watch dia manan-kery ho an'ny…
* Avaratry ny zotram-pirenena Flagler / Volusia mankany amin'ny tora-pasika Fernandina
* Avaratra sy andrefan'ny Chassahowitzka mankany Indian Pass
* Faritany kiobanin'i Holguin sy Las Tunas
* Faritany kiobanin'i Holguin, Las Tunas, La Habana, ary Ciudad de la Habana
A Tropical Storm Watch dia manan-kery ho an'ny…
* Avaratry ny tora-pasika Fernandina mankany Altamaha Sound
Ny fampitandremana amin'ny tafio-drivotra mahery dia midika fa misy loza ateraky ny fihenan'ny ainy, vokatry ny fiakaran'ny rano miakatra mankamin'ny morontsiraka, mandritra ny 36 ora manaraka any amin'ireo toerana voalaza. Raha mila fanehoana ireo faritra tandindomin-doza dia jereo ny National Weather
Watch Storm Surge Surge / sary fampitandremana, azo jerena ao amin'ny hurricanes.gov. Tinstructions avy amin'ny tompon'andraikitra eo an-toerana.
Tamin'ny 500 AM EDT (0900 UTC), ny afovoan'i Hurricane Irma dia teo akaikin'ny latitude 22.5 Avaratra, longitude 78.8 West. Irma dia mizotra mankany amin'ny faritra andrefana-avaratra andrefana akaikin'ny 12 mph (19 km / ora). Ny fihodinana mankany avaratra andrefana dia andrasana anio hariva, ary ny avadika ho any avaratra-avaratra andrefana dia anio alina na amin'ny alahady. Amin'ny lalan'ny vinavina, ny afovoan'i Irma dia hifindra eo akaikin'ny morontsiraka avaratry Kiobà anio, eo akaikin'ny Florida Keys Alahady maraina, ary avy eo akaikin'ny morontsiraka atsimo andrefan'ny Florida Alahady tolakandro.
Ny rivotra mahery maharitra dia eo akaikin'ny 155 mph (250 km / h) miaraka amin'ny rivotra mahery. Irma dia rivo-doza sokajy faha-4 amin'ny refy amin'ny rivodoza Saffir-Simpson. Ny fiovan'ny toetr'andro sasany dia mety mandritra ny andro manaraka na roa, saingy antenaina hijanona ho rivodoza mahery i Irma rehefa manakaiky an'i Florida.
Ny rivodoza mahery dia mipaka hatrany amin'ny 70 kilaometatra avy eo afovoany ary ny rivotra tropikaly-tafio-drivotra dia mivoaka hatrany amin'ny 110 km.
Ny tsindry afovoany farany ambany indrindra dia 930 mb (27.47 santimetatra).
FITORIANA STORM: Ny fitambaran'ny tafio-drivotra mampidi-doza sy ny fisondrotan'ny ranomasina dia hiteraka tondra-drano miakatra mankany afovoan-tany avy eo amoron'ny morontsiraka. Ny rano dia antenaina hahatratra ireto haavo HEVITRA etsy ambony ireto raha toa ka miseho ny onja tampoka amin'ny fotoanan'ny safo-dranomasina…
SW Florida avy any Captiva ka hatrany Cape Sable… 8 ka hatramin'ny 12 ft
Cape Sable mankany Boca Raton ao anatin'izany ny Florida Keys… 5 ka hatramin'ny 10 ft
Venise mankany Captiva… 5 hatramin'ny 8 ft
Reniranon'i Suwannee hatrany Venise, anisan'izany ny Tampa Bay… 3 ka hatramin'ny 5 ft
Boca Raton mankany amin'ny làlan'ny Flagler / Volusia County… 2 ka hatramin'ny 4 ft
Ny fampifangaroana ny tafiotra mahery vaika sy ny onja mahery vaika dia hampiakatra ny haavon'ny rano ambonin'ireo ambaratonga fampitandremana momba ny rivodoza akaikin'ny sy avaratry ny afovoan'i Irma. Akaiky ny morontsiraka, ny onja dia hiaraka amin'ny onja lehibe sy manimba.
Nosy marokoroko any Bahamas… 15 hatramin'ny 20 ft
Bahamas afovoany sy avaratra andrefana… 3 ka hatramin'ny 6 ft
FANOMPOANA: Mbola misy ny rivodoza amin'ny ampahany amin'ny Bahamas afovoany, ary koa ny Nosy Ragged. Ny fepetra amin'ny rivodoza dia andrasana hitohy ao anatin'ny faritra fampitandremana ny rivo-doza manamorona ny morontsiraka avaratr'i Kiobà mandraka androany. Andrasana any avaratra andrefana avaratr'i Bahamas anio ny toetr'andro, ary amin'ny faritra atsimo sy afovoany Florida ary Florida Keys anio alina sy alahady.
Ny rivodoza sy ny tafio-drivotra tropikaly dia azo atao ao anatin'ny faritra fiambenana any afovoan'i Florida avaratra amin'ny alahady.
RAINFALL: Irma dia antenaina hamokatra ireto fanangonana orana manaraka ireto hatramin'ny talata alina:
Kiobà Avaratra… 10 ka hatramin'ny 15 santimetatra, 20 santimetatra mitoka-monina. Kiobà atsimo… 5 ka hatramin'ny 10 santimetatra, 15 santimetatra mitoka-monina.
Bahamas Andrefana… 3 ka hatramin'ny 6 santimetatra, 10 santimetatra mitoka-monina.
Ny Florida Keys… 10 ka hatramin'ny 20 santimetatra, mitokana 25 santimetatra.
Ny saikinosy Florida sy atsimo atsinanan'i Georgia… 8 ka hatramin'ny 15 sentimetatra, mitokana 20 santimetatra.
Ny atsinanana Florida Panhandle… 3 ka hatramin'ny 6 santimetatra, mitokana 8 santimetatra.
Ny sisa any atsinanan'i Georgia, Andrefana South Carolina, ary ny avaratra Andrefana
Carolina… 4 ka hatramin'ny 8 santimetatra. Zeorzia Andrefana, atsinanana ary avaratra
Alabama, ary atsimo Tennessee… 2 ka hatramin'ny 5 santimetatra.
Amin'ny faritra rehetra, io orana io dia mety hiteraka tondra-drano mampidi-doza ary, amin'ny faritra sasany, ny fihotsahan'ny fotaka.
TORNADOES: Misy tadion-tsofina vitsivitsy azo atao anio sy anio alina any atsimon'ny Florida.
SURF: Misy fiantraikany amin'ny atsimo atsinanana ny fivontosana vokatry ny famokarana an'i Irma
Bahamas, ny Nosy Turks ary Caicos, ny morontsiraka avaratry ny
Repoblika Dominikanina, ary ny morontsiraka atsimoatsinanan'i Etazonia ankehitriny. Ireo fivontosana ireo dia mety hiteraka fisamboaravoaran-doza atahorana ny fiainana ankehitriny. Azafady mba jereo ny vokatra avy amin'ny biraon'ny toetr'andro eo an-toerana.